Spotify maka Mac? Isiokwu a dozie gị niile mbipụta
Spotify bụ a music gụgharia ọrụ na-enye ọtụtụ nde songs na ohere ka ọrụ. Na nnukwu katalọgụ dị, Spotify awade nnukwu collection nke songs, nke nwere ike na-egwuri ma online ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị. Spotify dị maka dị iche iche nyiwe na nyiwe n'ụdị Mac, Windows, iPhone, Android na ndị niile ọzọ, ngwa-akwado ndị niile dịnụ nyiwe na awade unmatchable atụmatụ n'ebe nile.
Nkebi nke 1: Spotify maka Mac
Nkebi nke 3: Wụnye Spotify Mac
Nkebi nke 4: Uninstall Spotify Mac
Part 5: Atụmatụ maka Spotify Mac airplay na Spotify ime Mac
Nkebi nke 6: Olee imelite Spotify Mac
Download Spotify music free on Mac na TunesGo
Part 1: Spotify maka Mac
The Mac Ọrụ usoro na gọzie mîkemeke Music Platform n'ụdị Spotify.
Spotify Free Mac bụ free version nke Spotify, nke dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ Spotify free version on ọ bụla ọzọ sistemụ. Na ụfọdụ mmachi na Spotify Free, nhọrọ ubé obere na free version ka tụnyere Spotify adịchaghị version on Mac.
Spotify Beta Mac bụ ọhụrụ version nke Spotify n'ihi nzube nke Mac na Windows ọrụ, nke na-enye ohere nbudata,-enyocha, na-enye nzaghachi ke ọhụrụ beta version nke ha desktọọpụ ngwa? Ihe dị iche na Spotify Beta Mac bụ ọdịdị nke User Interface. N'elu mmanya na search igbe na navigation akụ, tinyere na ala mmanya na ọkpụkpọ njikwa obere ibu, na ibu ihe oyiyi ka dakọtara.
Lee ọtụtụ snapshots maka mgbanwe na eche ihe dị iche na gị onwe gị.
Nkebi nke 2: Download Spotify Mac
Usoro nke nbudata Spotify-amalite na nzọụkwụ mbụ nke registration on Spotify akaụntụ. Ka anya dị ka ị denyere aha na akaụntụ, ị na-ibugharị peeji nke ebe echichi nke Spotify on Mac amalite. N'ihi na usoro nke download nke Spotify on Mac, soro n'okpuru kwuru nzọụkwụ.
Ma faịlụ ebupụta na-akpaghị aka ma ọ bụ ị na aka ibudata ya, nchọgharị gị kpaliri gị ịzọpụta Spotify.dmg faịlụ.
Na Firefox nchọgharị, pịa Save Njikwa n'ịkwado ịzọpụta, Otú ọ dị ozi dị iche dabere na ihe nchọgharị ị na-eji. Faịlụ ebudatara ma ị nwere ike ịhụ n'ụzọ doro anya ya na download ngalaba.
Abụọ-pịa faịlụ na-emeghe ebudatara faịlụ
Ozugbo ị abụọ pịa na ebudatara faịlụ, windo na-egosi nke kpaliri gị ịdọrọ Spotify icon gị Ngwa nchekwa dị ka e gosiri na snapshot n'okpuru.
Pịa akara ngosi a na window na ịdọrọ ya gaa na Ngwa nchekwa gosiri na-esote ya
A igbe pụrụ iyi, o doro anya banyere ozi na Spotify-apụghị kpaliri ebe Ngwa-apụghị gbanwetụrụ
Ọ bụrụ na, ịdọ aka ná ntị dialog igbe na-egosi, pịa nyochaa na-abanye na nchịkwa si aha njirimara na paswọọdụ na ederede igbe nyere. Mgbe ahụ dị nnọọ pịa Abanye na inabata usoro ma wụnye ihe omume.
A igbe pụrụ iyi arịọ maka ihu ọma gị nke na ọ bụrụ na Spotify nwere ike ịnweta gị Eriri Ngakọ Igodo
N'ihi ya, Pịa Kwèré iji nye Spotify ohere gị Eriri Ngakọ Igodo
Gị Eriri Ngakọ Igodo pụrụ ịzọpụta gị site na-enwe na-abanye na nchịkwa paswọọdụ oge ọ bụla ị na-emeghe usoro ihe omume. Ma ị pụrụ ịdị mkpa ka tịghachị ya mgbe software Nwela emelitere bụla ugbu a na ọzọ.
Spotify ugbu a echekwara na gị Ngwa nchekwa
Ugbu a, ọ na-adabere gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ike a njikọ ya na gị n'ọdụ ụgbọ mmiri site na ịpị na-adọkpụpụta na akara ngosi
Iwepụ Spotify na gị Mac, ihe niile ị chọrọ bụ ịgbaso ole na ole dị mfe nzọụkwụ, nke na-e depụtara n'okpuru ebe
Iji malite usoro nke un-echichi mkpa ka ị kpamkpam wepuÚ Spotify. N'ihi na nke a na-aga Spotify menu wee pịa 'Kwụsị'. Ozugbo i ịkwụsị Spotify na ọ bụ agaghịkwa na-egosi gị omume mmanya, ị nwere ike iwepụ ya.
Ị ga-ahụ mkpa na-emeghe gị Finder menu mmanya na n'okpuru 'Gaa', dị nnọọ ịhụ gị n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụrụ na gị ọbá akwụkwọ adịghị anya, wee pịa alt isi na ya ga-apụta. Ozugbo ị pịa Ọbá akwụkwọ, gị ọbá akwụkwọ nchekwa ga-emeghe, ikwe gị ka ịnweta ọdịnaya.
Ozugbo ị nọ gị Ọbá akwụkwọ, na-aga gị Cache na ihichapụ Spotify nchekwa. Nke a na nchekwa pụrụ ịchọta dị ka 'com.spotify.client' ma ị nwere ike nri pịa ya ka ihichapụ ma ọ bụ i nwere ike iji aka ịdọrọ ya na gị na ahịhịa nchekwa.
See azụ bọtịnụ na Ozugbo ị na-azụ na gị n'ọbá akwụkwọ. Ugbu a na-aga gị Ngwa na nchekwa ma ka anya dị ka ị nọ gị Ngwa ngalaba, ihichapụ Spotify nchekwa si gị ngwa. N'ihi na usoro a kwa, na ị nwere ike ma nri pịa ma họrọ 'ihichapụ' site menu ma ọ bụ i nwere ike iji aka ịdọrọ nchekwa gị ahịhịa, otu dị ka n'ihu. N'okpuru ebe bụ screenshot maka otu.
Emeghe gị chọtara menu ma họrọ 'ná Ntụkwasị Obi efu ahịhịa'. Nke a ga-eme ka n'aka na faịlụ e na ntukwasi-obi ehichapụ na kọmputa gị. Lee screenshot maka otu.
Ozugbo i bupụrụ gị ahịhịa, ị ga-achọ Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa na mgbe ị na-eme, Spotify ga e kpamkpam wepụrụ gị na kọmputa.
Spotify nwere ike na-egwuri na Mac OS X. Na gụgharia music si isi mmalite ndị ọzọ dị ka Spotify ma ọ bụ Slacker, na airplay abịa nnapụta. Ọ na-enyere ndị gụgharia nke niile audio si Mac iji airplay.
Olee otú iji Spotify airplay Mac
N'ihi nzube iji Spotify airplay Mac, niile ị chọrọ bụ ịgbanwe ọdịyo mmepụta gị Mac. The nzọụkwụ kwuru bụ dị ka ndị
Play gị Spotify music na Spotify ngwa
Ugboro abụọ pịa n'ụlọ bọtịnụ na iDevice
Pịgharịa al ụzọ ekpe ka ebe olu mmịfe na egosiri
Kpatụ airplay icon
Nkebi nke 6: otú imelite Spotify Mac
The Update usoro nke Spotify on Mac bụ nnọọ yiri ka Windows. Ma-echeta mgbe nile na usoro nke aka igbochi akpaaka-downgrade gị Spotify.
Ugbu a, n'ihi update usoro, jiri Official installer nke nwere ike ibudatara na ukara website nke Spotify na-anọgide na usoro nke update dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ dị mfe update usoro nke ọ bụla ọzọ ngwa.
> Resource> Spotify> Spotify maka Mac? Nke a Guide solves All Your Issues